Lisitry ny milina
Toeram-panjaitra mandeha ho azy
Bartack sy zaitra fanjairana
Fametahana bokotra sy perla
Fahano ny sandry
Masinina fanjairana manokana
Lisitry ny entana
Masinina fivarotana mafana: milina fanenomana paosy mandeha ho azy
Ny asa no lafo indrindra amin'ny ho avy. Ny automation dia mamaha ny olana amin'ny tanana, fa ny digitalisation kosa dia mamaha ny olan'ny fitantanana. Ny famokarana manan-tsaina no safidy tsara indrindra ho an'ny orinasa. Ny milina fanenomana paosy mandeha ho azy, torolàlana 4 miaraka am-paosin-dabozia, mamoritra ary manjaitra ...
Fahafahana milina fanenomana paosy laser amin'ny 2021
Taorian'ny niainan'ny indostrian'ny milina fanjairana ny "fahanginana" tamin'ny taon-dasa, tamin'ity taona ity ny tsena dia nitondra fanarenana matanjaka. Mitombo hatrany ny baikon'ny ozinina ary fantatray mazava tsara ny fanarenana ny tsena. Mandritra izany fotoana izany, ny famatsiana ny spar hilatsaka ...
Ilay Mpamonjy orinasa mpamokatra akanjo: mpanamboatra paosy haingam-pandeha mandeha ho azy
TS-199 series pocket setter dia milina fanjairana mandeha ho azy haingam-pandeha ho an'ny zaitra am-paosy akanjo. Ireo milina mpanamboatra paosy ireo dia manana fanjairana avo lenta sy kalitao azo antoka. Raha ampitahaina amin'ny famokarana boky fampianarana nentim-paharazana, dia mitombo 4-5 heny ny fahombiazan'ny asa. Iray ...
Izao tontolo izao voalohany: Masinina manjaitra paompy laser am-paosy
Mbola manahy ny tsy hahita mpiasa mahay ve ianao? Mbola manahy ny amin'ny fiakaran'ny vidin'ny asa ve ianao? Mbola maika ve ianao hamita ny baiko? Mbola sahirana amin'ny fahasarotana sy ny faharetan'ny fanjairana zipper ho an'ny paosy ve ianao? Ny orinasanay vao haingana d ...
Nalefaka ny famokarana
Nanangana trano fananganana orinasa vaovao ny orinasa ary nanampy andalana famokarana 20 notsofina, niaraka tamin'ny famokarana 15 taonina isan'andro. Ankehitriny manana ekipa teknika matanjaka izahay, mahafeno ny filan'ny firenena isan-karazany amin'ny fampiasana saron-tava samy hafa arakaraka ny filan'ny mpanjifa samihafa ho an'ny cus tsy mahazatra ...
Lamba tsy voatenona sy famokarana lamba notsofina
Ny orinasanay dia miara-miasa amin'ny fanovana lamba tsy voatenona Co., Ltd mba hampitomboana ny tsipika famokarana. Ankehitriny ny vokatra isan'andro amin'ny lamba tsy tenona dia 10 taonina, ary ny vokatra ateraky ny lamba notsofina dia 3 taonina. Nojerena tsara tamin'ny akora rehetra, miorina amin'ny kalitao hatramin'ny material base ka hatramin'ny masterbatch.
Fivarotana famokarana sarontava
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-04-02
Tamin'ny fotoanan'ny coronavirus mahery tany Chine dia nahazo ny torolàlana avy amin'ny governemanta ny orinasanay mba hamokarana masinina sy sarontava. Ny orinasanay koa dia nandamina haingana ny mpiasa teknika hanatanterahana ny R&D sy ny famokarana. Ny sarontava novokarinay dia nahatratra ny fenitra avo indrindra amin'ny indu ...
Hatramin'ny faran'ny taona 2019, manana milina mpanamboatra paosy feno milina izahay, milina fanjairana modely bartack, milina fanjairana modely karazana Rahalahy, milina fanjairana modely Juki, fantsom-bokotra, ary milina fanaovana perla, ary karazana milina fanjairana mandeha ho azy. 1. Masinina mpanamboatra paosy: poketra 199 andiany ...
Tamin'ny tapaky ny volana nov, nandeha tany amin'ny Agent America izahay ho an'ny fiofanana ho an'ny paosy mandeha ho azy
Fiofanana ao anatin'izany: 1. ny fomba fanaovana programa. 2. Ahoana ny fanovana ny programa. 3. ny fomba fanovana ny clamp sy ny fanitsiana ny masinina ho an'ny paosin'akanjo pataloha jeans, aorian'izay dia ampianarinay azy ireo ny fomba fanovana ny clamp sy ny fanitsiana ny masinina ho an'ny paosy lobaka. 4. Ahoana no hamahana ny olana raha ...
Tamin'ny faran'ny volana nov, 2019, nandeha tany amin'ny tranokalan'ny mpanjifa ao Bangladesh izahay ho an'ny fampiofanana milina fametahana paosy mandeha ho azy.
Alohan'ny hampiasana milina vy am-paosy iray, ary avy eo milina fametahana paosy semi-automatique. Ampiasao izao ny milina fametahana paosy vy tsy mandeha ho azy, afaka mamonjy mpiasa sy fotoana. Mianatra mafy ny teknisiana ho an'ny mpanjifa. Rehefa mianatra dia manao rakitsoratra koa izy ireo. Tena mahay ny teknisiana. Taorian'ny sev ...
Lalana No.1 Yewang, tanàna Yexie, distrikan'i Songjiang, Shanghai, Sina